Taleefan nambar oo la sheegay in laga leeyahay Soomaaliya oo dadka reer Iswiidhan jaha wareer ku riday | Somaliska
Nr-kaan aad arkeeysaan ayaa lugu sheegay mid laga leeyahay wadanka Soomaaliya ama u muuqaal eg yahay mid ah. Wargeyska Gothenburg Post ee Iswiidhan kasoo baxay, ayaa cadkiisi maanta ee internet-ka ku soo baxay ku daabacay warbixin uu kaga hadlayo nr-kan waxa uu yahay iyo loo maleeynayo ineey ka dambeeyaan.
Dadweyne jaha wareersan oola xirriiray qaar ka mid ah wargeysyada maxaliga ah ayaa sheegay in markii nr-kaas soo wacay taleefanooda oo ay ku celiyeen si ay u oogaadan cidda soo wacday lugu xirro mashiin fariimaha qabta oo muusik ku xiran yahay. Dadweynahan ayaaa sidoo kale sheegay in waqti dheer ku qaadato ineey cidi u jawaabto ama la hadasho, taasoo ugu dambeyntiina keentay in lugu soo dalaco lacago farro badan, maadama taleefan nambarku yahay mid Afrika ah gaar ahaan Soomaaliya oo uu wargeyska Gothenburg Post sidaa sheegay.
Bogga rasmiga ah ee ay booliska Iswiidhan ku leeyyihiin internet-ka ayaa uga digaya dadweynaha in aysan wicin nr-ka 252 ka bilowdo, kaasoo ay sheegeen inuu yahay mid ay adeegsanayaan tuuggo aan la ogeyn waxa ay tahay. Boolisku waxaa kale oo ay sheegeen ineeysan ogeyn cida ka dambeeysa jaha wareerinta dadyow badan oo nr-kaas laga soo wacay. Ugu dambeeyntiina nr-ka bilowdo 252 oo ah mid lugu sheegay in laga leeyahay Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey dalka oo dhan intiisa badan dadweynaha ku dhaqan laga soo wacayey nr-kaas oo jaha wareer iyo su,aalo badan geliyey.
😀😀😀😀😀😀beeenta daaa anaa Göteborg jooga wax isowacane ma arkin wax sheegayana ma arkin
Guud ahaan dalka Sweden ayaa laga hadlayaa ee göteborg kuma koobna warbixinta abayo mana ahan soomaalida oo kaliys waxa la wacayo sidaas u fahan sheekada.
Waa saax walaalo dadka la wacaayano waxa waye dad ushaqeeyo shirkade lacaagta lee waxaan arkaay dad soomaali ah postat xata SaaS loso wacaay. Wana dad tuuga ah dadkaas . Marka soomaaliyeey ka digtoonada qufkii telefon kiisa furaan yahaay oo meelkasta ka waci karo iska jira